विभिन्न समयका मानिसहरु को लागि वर्षा विशेष महत्व थियो। उनले खाना बढाउन, पिउने पानी, आदि इकट्ठा गर्न मद्दत गरे। यही कारणले गर्दा वर्षा ईतिहास धेरै राष्ट्रहरूको जीवन र संस्कृतिमा एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थियो, र प्रत्येकको आफ्नै देवता थियो। तिनीहरू उपासना गरिएका थिए, मूर्तिहरू बनाउँथे र मन्दिरहरू बनाउँथे।
मा माया को बारिश
चक मूलतः जंगल सफा गर्ने एक देवता थियो र केहि समय पछि उहाँ वर्षा, चोर र बिद्युतको संरक्षक हुनुभयो। अनुवादमा नाम भनेको "अक्ष" हो। विशिष्ट विशेषताहरु - मुख को कोने मा एक लामो नाक र सांप। उनले चक नीलो छालाको चित्रण गरे। मुख्य विशेषताहरु अक्ष, एक मशाल वा पानी संग भाँडाहरू छन्। मातृ जनजातिहरू चर्को न केवल एक देवताको रूपमा मात्र होइन, तर चार सम्मोहनहरूमा पनि संसारका पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् र छालाको रंगमा भिन्न हुन्छन्: पूर्वी - रातो, उत्तरी - सेतो, पश्चिम - कालो र दक्षिण - पहेंलो। अहिले सम्म, एक विशेष समारोह Yucatan मा आयोजित वर्षा को कारण, र यसलाई "चकक" भनिन्छ।
स्लाइसहरूमा वर्षाको भगवान
पेरन न केवल वर्षाको लागि, तर थोरै र बिजुलीको लागि। बाहिर, उहाँ वयस्क वयस्क हुनुहुन्छ। उहाँको कपाल खैरो छ, र उनको मूंछ र दाँया अँध्यारो सुनको छ। सुनहरा कवच पेरुनमा लुगा लगायो। उहाँको हतियार तलवार र अक्ष हो, तर प्रायः उहाँले बिजुलीको प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले आगो घोडा वा रथमा चल्नुहुन्छ। पेरुनका घरहरू उच्च मैदानमा स्थापित भएका थिए, र मूर्तिहरू मुख्य रूपमा ओकको बनाइए, यस रूखको प्रतीक हो। बुल्सले उसलाई बलिदान ल्याए।
सद्मीहरूको बारिश देवता
इशारा न केवल वर्षाको लागि मात्र हुन्छ, तर गोरखा, आँसु, र हावाको लागि पनि। मूलतया, यो ईश्वर नकारात्मक विशेषताहरु संग सम्बन्धित छ र उसलाई उसलाई "क्रोध को जंगली बुल" भनिन्छ। उनीहरूले पेरनको एनालॉगलाई बोलाउँछन्। उनीहरूले प्रायः उनलाई हिच्छा र क्याथोडको बन्डल लगाए। उनको शिरमा चार सींगहरू थिए। इशोकूलाई सैन्य ढालमा उभिएको रूपमा चित्रण गरिएको थियो। यस ईश्वरको साथ इमेजोग्राफीमा, एक बुल सम्बद्ध थियो, अपमानजनक र प्रजनन को व्यक्तित्व।
"हेलमेट हेलमेट" - स्लाइस चापलको अर्थ
अप्ठ्यारो - राक्षसहरूको साथ जुनूनको वास्तविक अवस्था
द फक्सको हल
Crimea मा पावरको स्थानहरू
कालो जादू र रनहरू
भगवान एक स्कैंडिनेवियाईयन पौराणिक कथा र यसको सशक्त शक्ति मा
ओर्थोडक्सोमा सेन्ट एनी - सबैभन्दा प्रसिद्ध संतहरू र तिनीहरूले के गर्न मद्दत गर्छन्?
त्यहाँ चुम्बनहरू छन्?
त्यहाँ एक स्लाइन्डम्यान छ?
ग्रीक पौराणिक कथामा साइबरबस को छ र उसले के गरे?
मनोविज्ञान र दर्शन मा एनिमेशन - दिलचस्प तथ्यहरु
चाँद कसरी एक व्यक्तिलाई असर गर्छ?
स्कुलको लागि कुर्सी
केटी 2013 को लागि ट्रयाकट्स
मोटो धागोको बुना भयो कोट
कुकुरको लागि बूथ कसरी निर्माण गर्ने?
गर्भावस्थाको समयमा Papaverin - इंजेक्शन
गर्भावस्थाको हप्ताबाट भ्रूण अन्डाको आकार - तालिका
नवजात शिशुहरुमा हंगुर हर्निया
यस कुकुरको कोठा तपाईंको भन्दा राम्रो देखिन्छ।
हम र पनीर संग रोल
जाडो - खाना पकाउने व्यञ्जनहरु को लागि Chanterelles मारा
विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञहरूको संगीत स्वाद
दिल को उपचार को अचानक
विभिन्न सॉस संग एक स्वादिष्ट पकवान को लागि भव्य व्यंजनहरु संग पोर्क ग्रुप
चीनीमा कति कैलोरीहरू छन्?
Opisthorchiasis - उपचार